Dambi Baarista Mareykanka oo baareysa sida loo jabsaday…
By axadle On Jul 17, 2020
Waaxda Dambi baarista Mareykanka ee loosoo gaabiyo FBI ayaa sheegtay in ay bilawday sida loo jabsaday Cinwaanada Twitter-ka ay leeyihiin Shaqsiyaad caanka ee u dhalatay Ameerikada Midowday.
FBI-da ayaa si rasmi ah u shaacisay in baaristeeda kusoo ogaaneyso aaladda lagu jabsaday, dalka lagu dhacay Cinwaanadaan iyo sababta ka dambeysay in la bartilmaameedsado shaqiyaadka caanka ah.
Magacyada dadka laga jabsaday Koontooyinkii Twitter-ka ay ku lahaayeen waxaa kamid ah Barack Obama hogamiyihii 44-aad, Joe Biden Hogamiye ku xigeenkii 47-aad, Kanye West oo ah Heesaaga, iyo Bill Gates oo ah maalqabeyn.
Inta la jabsaday ayaa taakulo looga dalbaday dadka ku xiran ee asaxaabta la ah Akoonadooda, waxaana lagu sheegay in lacagahaas la uruurinayo haddii la helo loo adeegsan doono Tabarucaad.
Bill Gates ayaa shaaciyay in dadka lacagaha la weydiistay ay isaga ka dalbadeen in uu siiyo lacago uu sheegay in kooxdii dhaca geysatay ka qaadatay, inkasta oo aan la tilmaamin tirada qarashka ay ka haleen kooxdaan.
“Cid walba waxa ay i weydiineysaa in aan usoo celiyo, farriin barta Twitter-ka lasoo dhigay ayaa lagu yiri “$1000 doolar ii soo dir anigana waxa aan kusoo dirayaa $2,000 oo doolar” ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay Barta Gates kolkii laga jabsaday.
Fariin ay ku caddeynayaan shaqsiyaadkaan caanka ah in ay dib u heleen koontooyinkooda twitter-ka ayay soo dhigeen, inkasta oo aysan kalsooni badan ku qabin dadka ku xiran oo tuhmay in isla burcaddii lacagta weydiisatay ay soo dhigi karaan, sidaasina ay ku waayeen kalsoonidooda.
axadle 3888 posts
Mauritius oil spill: Government say virtually all oil got…